Dhul-beereed ku yaalay Karin oo dab-xoogani qabsaday. iyo qaylo-dhaan gurmad oo waxgaradka tuuladaasi kasoo yeeraya. – Radio Daljir
Luulyo 30, 2012 11:49 b 0
Karin, July, 30 – Wararka idaacadda Daljir ay ka helayso tuulada Karin ee gobolka Barri ayaa ku waramaya in maantay saacadu markay ahayd 12-kii duhurnimo uu dab ka dhex-qarxay beerihii ku dhex-yaalay tuulada Karin ee gobolka Bari.
Axmed Cabdi Goombe oo ah guddoomiyaha tuulada Karin ee maamulka Puntland oo waraysi gaar ah siiyay Radio Daljir ayaa sheegay in dadka tuulada ku dhaqan ay ku guul-daraysteen dabkaasi inay damiyaan, inkastoo uu tilmaamay in guddoomiyaha degmadu uu soo gaarsiiyay booyado iyo gurmad dabkaasi lagu-hakinayo.
Guddoomiyaha tuulada Karin Axmed Goombe waxaa uu hadalkiisa raaciyay in khasaare-baaxad-leh uu soo gaaray nolashii bulshada tuulada dhaqan, waxaana isagoo hadalkiisa siiwata uu yiri \_”Karin marka laga soo tago Xijiga oo dad yar ka ganacsadaan, nolasha tuulada oo dhan waxaa uu ku xirnaa waxsoosaarka beeraha, waxaana bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda Puntland u sheegaynaa gurmad dhinac-walba ah in looga baahan yahay dadkaan in loo fidiyo\_”.
Maxamed C/llaahi Cali \_ http://daljir.com/
Ra?iisul W. Soomaaliya ayaa maanta ka qaybgalay kulan ay kasoo qabygaleen boqlaal dhalinyaro ah.